यस्तो छ ऋचाले आत्मा हत्या गर्नुको रहस्य (भिडियो सहित ) – Complete Nepali News Portal
यस्तो छ ऋचाले आत्मा हत्या गर्नुको रहस्य (भिडियो सहित )
October 23, 2017	2,525 Views
सुन्दर रुपकी धनी ऋचाले स्वहत्या गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा छाएपछि उनको नाम सर्च गरेर आत्महत्या समस्याको समाधान होईन भनेर कमेन्ट र पोष्ट सुरु भएको छ ।ऋचा साथीसंगीबीच पनि उत्तिकै मिलनसार रहेको उनीप्रति व्यक्त भएको श्रद्धाभावले पुष्टि गर्दछ ।
कार्तिक ५ गते दिउँसो २ बजेसम्म फेसबुकमा एक्टिभ रहेकी उनले एक्कासी किन आत्महत्या गरिन् ? रहस्यमै छ । उनका बारे पनि धेरैलाई थाहा छैन ।वुमन्स रुम रिलोडेड (डब्लुआरआर) मा सक्रिय सदस्य रहेको कुरा बाहिर फेसबुकमा खुलेको छ । अन्य जानकारी तल भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
तीन करोड नेपालीको शिर नझुक्ने काम गरेर यसरी शानदार रुपमा फर्किए ओली (भिडियो सहित)
चेली हरुको शाहस : बुद्धको झण्डा र मुर्ति सगरमाथामा पुर्याउदै ! (भिडियो सहित)
यसरी मिले रबि लामिछाने र धुर्मुस! के अब बन्ला त गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला हाम्रो देशमा ? (बिशेस लाइव भिडियो)
खुट्टा काँधमाथि राखेर छमछमी नाच्ने र बाइक समेत चलाउने अचम्मका युवा [हेर्नुहोस् भिडियो]
हाम्रो उचाईं सानो भए पनि मन सानो छैन; एकचोटि हेर्नै पर्ने मनै रुवाउने अन्तर्वार्ता [हेर्नुहोस् भिडियो]
सिमसिमे पानीमाको विषयमा भिटेन भन्छन् ‘राम्रो गीतलाई बचाउन खोजेको थिएँ’ (भिडियो अन्तरवार्ता)